Post oge: Apr-30-2021
Nhazi AOOD na imeputa mgbanaka ROV dị elu na ọnụ ahịa dị ọnụ ala ruo ọtụtụ iri afọ. Anyị na -emezi mgbaaka mgbapụta ROV anyị mgbe niile wee mepụta ngwaahịa ọhụrụ iji mezuo ihe ndị achọrọ. Ngwọta mgbanaka mgbanaka ROV anyị gụnyere mgbanaka mgbanaka eletrik, FORJs, nkwonkwo rotary/ swivels ma ọ bụ c ...GỤKWUO »
Mgbanaka mgbanaka bụ njikọ na-agbanwe agbanwe nke na-enye njikọ eletriki site na ọdụ kwụ ọtọ ruo n'elu ikpo okwu na-agbagharị, ọ nwere ike melite arụmọrụ igwe, mee ka ọrụ sistemụ dị mfe ma kpochapụ wires na-emebi emebi na-esite na nkwonkwo a na-ebugharị ebugharị. A na -eji mgbanaka mgbanaka agbatị na igwefoto igwefoto ikuku ikuku ...GỤKWUO »
Oge ezipụ: Mar-09-2021
Gịnị bụ mgbanaka mgbanaka? Mgbanaka mgbanaka bụ ngwaọrụ eletrọnịkịkị nke na -enye ohere ntụgharị 360 na -akparaghị ókè mgbe ị na -ebufe ike, akara, data ma ọ bụ mgbasa ozi site na ọdụ kwụ ọtọ gaa na nyiwe na -agbagharị, ọ bụ njikọta rotary dị mkpa ma ọ bụ interface eletriki maka ọtụtụ syst control control ...GỤKWUO »
Dual Channel High Definition (HD) Slip Ring ADC24-1U-2SDI
Oge ezipụ: Jan-18-2021
AOOD nkọwa dị elu (HD) na-eji mgbanaka vidiyo ebugharị 1080P ma ọ bụ 1080I HD-SDI vidiyo vidiyo site na njedebe kwụ ọtọ na njedebe na-atụgharị mgbe ọ na-achọ ntụgharị na-akparaghị ókè. AOOD dị ka onye nrụpụta mgbanaka mgbanaka elektrọnik tụkwasịrị obi, nye Ethernet HD vidiyo mgbanaka mgbanaka solu ...GỤKWUO »
Ngwọta nnyefe na -atụgharị maka Ngwa igwefoto
AOOD bụ teknụzụ dabere na ihe ọhụrụ dabere na mgbanaka mgbanaka na onye nrụpụta nkwonkwo rotary. AOOD na -enye mgbanaka mkpuchi capsule agbakwunyere na coax rotary joint/ FORJ iji gboo mkpa nke nkwụsi ike, nnukwu ọsọ/ nnukwu data na ogologo ndụ maka igwefoto ikuku s ...GỤKWUO »
Robots nke ụlọ ghọrọ nnukwu ahịa robot nke mgbanaka mgbanaka
Oge nzipu: Jan-11-2020
Na ngwa robotic, a na -akpọ mgbanaka rọba dị ka njikọta robotic ma ọ bụ mgbanaka mgbanaka robot. A na -eji ya ebunye mgbama na ike site na ntọala ruo na ngalaba njikwa ogwe aka robotic. O nwere akụkụ abụọ: a na -etinye otu akụkụ kwụ ọtọ na ogwe aka robot, otu akụkụ na -atụgharị na -agbago na nkwojiaka robot. Na ro ...GỤKWUO »
Nguzogide mkpọtụ Downhole na Ngwọta mgbanaka mgbanaka dị elu
Ngwaọrụ Downhole chọrọ mgbanaka mmịfe iji nyefee ike na data wee kpochapụ igodo USB na mkpọda na gburugburu mkpọtụ kacha njọ. AOOD dị ka onye nrụpụta ihe na onye na -emepụta mgbaaka mgbanaka eletrik, na -elekwasị anya mgbe niile na ngwa ọhụrụ nke ngwaọrụ mkpọpu ala maka mgbaaka mgbanaka.GỤKWUO »
Tinyere ịrị elu na-arịwanye elu nke ọtụtụ ọwa nwere akara ngosi vidiyo dị elu na 1080P HD akụrụngwa, AOOD mepụtara ụzọ ọhụrụ 36 HD-SDI mgbanaka mgbanaka ADC36-SDI. Ihe nlereanya a nwere dayameta 22mm na naanị 70mm dị elu, na -enwe ike ịnyefe ụzọ 36 akara/ike nkịtị na ụzọ 1 RF rotary joi ...GỤKWUO »
“Mgbapụ Ọdụdọ” VS “Ndị na -ejikọ ọkụ eletrik”
Mgbe ndị ahịa na -ahọrọ mgbanaka mgbanaka nke chọrọ ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ, nnyefe dị elu ugbu a na ogologo ndụ ha, ha yikarịrị ka ịhọrọ mgbanaka mgbanaka mercury, nke a na -akpọkwa njikọta ọkụ eletrik na -agbagharị ma ọ bụ mgbanaka enweghị mgbọ. Njikọ eletriki na -atụgharị na -arụkwa otu ọrụ nnyefe ...GỤKWUO »
Otu mgbanaka mgbanaka mgbanaka na -arụ ọrụ na sistemụ Antenna
A na -achọwanyewanye usoro nkwukọrịta brọdband n'ụdị dị iche iche nke igwe mkpanaka, dịka ọmụmaatụ, ụgbọ mmiri, ụgbọ ala na ụgbọ elu. A kwadebere nke ọ bụla n'ime ngwa ọrụ ndị a nwere otu ma ọ bụ karịa radars, na radar ọ bụla nwere sistemụ antenna dị iche, na -anya ụgbọ ...GỤKWUO »
Mgbakọ mgbanaka mgbanaka eji eme ihe na akụrụngwa ụlọ nyocha
Mgbanaka mgbanaka eriri dị ka njikọta ọkụ eletrik na -agbanwe agbanwe nke na -enye ohere ịnyefe ike na akara site na ọdụ ka ọ bụrụ ikpo okwu na -agbagharị, enwere ike iji ya na sistemụ elektrọn ọ bụla nke chọrọ enweghị mgbochi, na -agbanwe agbanwe ma ọ bụ na -aga n'ihu mgbe ị na -ebufe ike na / ma ọ bụ data. ..GỤKWUO »
Ahịa ụlọ ahịa toba ikuku nke ụwa na -aga n'ihu
Nchọpụta ọhụrụ na -egosi ike ikuku na -aga n'ihu na -abụ nhọrọ nhọrọ ume ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, ebe a na -atụ anya na ụlọ ahịa ụlọ ahịa ikuku ga -abawanye site na ijeri $ 12.1 na 2013 ruo $ 19.3 ijeri site na 2020, ọnụego uto kwa afọ nke pasent 6.9. Dị ka akụkọ ọhụrụ sitere na nyocha na nyocha f ...GỤKWUO »